Adreesị IP onwe onye 192.168.8.2 a na-enyefe ya na igwe n'ime netwọkụ jikọtara & adịghị ngwa ngwa ịchụ nta na net. Iji mee ka nweta adreesị IP n'ime ụlọ ọrụ na netwọkụ, edebere adreesị echekwa. O nweghi mgbalị ọ bụla ịchọpụta adreesị IP nke onwe gị site na ịkọwa foto dị adị.
IP 192.168.8.2 is IP akọwapụtara na iji njikwa njikwa nke ndị na-eme njem. A gbakwunyere IPs ndị ọzọ dị ka 192.168.123.1, 192.168.77.1, 192.168.8.1, wdg. Kpamkpam zuru ụwa ọnụ maka router IPs. A na-akpọ ya dị ka "IP Default Gateway".
Adreesị IP https://192.168.8.2 edere ya na Internet Authority Nọmba Nyere IANA dịka akụkụ nke netwọk 192.168.8.0/24 echekwara. Na adreesị IP nke onwe adịghị ekenye otu ọ bụla na onye ọ bụla nwere ike iji adreesị IP na-enweghị nkwekọrịta nke ndekọ mpaghara mpaghara Internetntanetị dị ka akọwara na 1918 RFC, pụrụ iche na adreesị IP obodo.
Nweta Admin Page 192.168.8.2
Nanị tinye 192.168.8.2 n'ime adreesị igbe nke ihe nchọgharị weebụ. Nwere ike jiri ibe ha rụọ ọrụ & ị nwedịrị ike ịbanye nbanye Passkey. Site ọkụkụ 192.168.8.2 njikọ ị nwekwara ike weghachite logon ya.
Ọzọkwa ị ga-enweta nsonaazụ ọchụchọ niile maka adreesị IP nkeonwe 192.168.8.2. Ọ bụrụ na ị na-achọ ịnyapụta nbanye maka ikuku routers, ntinye nkwụnye, ma ọ bụ mọdem ị nwere ike iji ya site na kụrụ na njikọ ahụ. Maka TP Link, D-Link, ma ọ bụ Netgear wireless router ihe kachasị baa uru aha njirimara ma ọ bụ okwuntughe bụ 'ntọala' ma ọ bụ 'nchịkwa', ị nwekwara ike weghachite ọnọdụ ndabara na azụ nke igwe ahụ. Ọ bụrụ na nke a anaghị arụ ọrụ, ị nwere ike ịhọrọ nke ọma ịtọgharịa ndị na-eme njem. Iji mee nke a ị kwesịrị ịpị & jide ntọala nrụpụta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ sekọnd 20. Emechaa re-guzosie ike na ụlọ ọrụ mmepụta ihe ntọala & akwadoro gị nbanye na particulars hụrụ na ihennyapade.
Adreesị IP 192.168.8.2 ka edere ya na Internet ekenyela Number Authority IANA dị ka nkewa nke netwọk nzuzo 192.168.8.0. Na adreesị IP nke onwe adịghị ekenye otu ọha mmadụ amachibidoro, na mgbakwunye na ISP, mmadụ niile nwere ike iji adreesị IP a na-enweghị nkwekọrịta nke ndekọ ndekọ mpaghara mpaghara.
Ka o sina dị, enweghị ike ibunye ngwugwu IP ndị amalitere site na nzuzo site na Ntanetị ọha na eze, ma yabụ ọ bụrụ na netwọọdụ dị otú ahụ chọrọ isonye na Internetntanetị, ọ ga-achọ ka a nweta ya site n'ọnụ ụzọ ntụgharị adreesị (nke a na-akpọkwa NAT), ma ọ bụ proxy nkesa na-.
A NAT ọnụ ụzọ ámá ọnụ ụzọ nwere ike ịbụ wireless ma ọ bụ ejikọrọ rawụta ị na-enweta site na brọdband. Adreesị IP edozi nke ngwa ọrụ a dị na ntanetị sitere na 192.168.8.0/24 nwere ike bụrụ 192.168.8.254 ma ọ bụ 192.168.8.1 na-adabere na isi mmalite. Enwere ike ịnweta ihu ụzọ ntanetị site na Protoc Transfer Protocols HTTP ọzọ protocol Transfer Protocol Secure HTTPS protocol. Maka ịnwale nke a ịchọrọ ịbanye na adreesị adreesị 'http: // ip address' ma ọ bụ 'https: // ip address' nke ihe nchọgharị weebụ ị họọrọ dị ka Google Chrome ma ọ bụ Mozilla Firefox nbanye na aha njirimara & PW nke onye na-eweta gị chọrọ. .
Categories IP address Mail igodo